Dharka Jiilaalka ee la isticmaalay - hissenglobal.com
Hissen Global waxay leedahay meel dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Shiinaha, oo leh in ka badan 50,000 goobaha dib-u-warshadaynta ee dharka la isticmaalay, waxayna la shaqeeyaan wax ka badan 6,000 machadyada tacliinta sare ee barnaamijka dib u warshadaynta. Hissen Global wuxuu leeyahay alaab cayriin oo tayo sare leh oo alaab-qeybiyeyaasha kale aysan haysan. Sida mid ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ee Hissen Global, Dharka jiilaalka ee la isticmaalo ayaa leh sahayda deggan ee alaabta, tayada la isku halayn karo, kala duwan, iyo qaab cusub. Haddii aad raadinayso alaab-qeybiye dharka jiilaalka ah, markaa Hissenglobal waa doorashadaada ugu fiican!
Jaakada Ragga Gacanta Labaad
Ragga Gacan-labaad ee dhididka
Ragga Gacanta Labaad Jean Pants
Dharka Jiilaalka ee Gacmaha Labaad
Dharka Jiilaalka ee Gacanta Labaad
Dharka Jiilaalka oo badan >>
Maxaad u dooratay Dharka Jiilaalka ee La Isticmaalay ee Hissen Global
Sahay deggan Hantidhawrka:
Hissneglobal waxay haysataa in ka badan 50,000 oo dhar-gacan labaad ah oo jooga goobaha dib u warshadaynta ee Shiinaha oo dhan. Waxaan si joogto ah u soo dejineynaa tayada, dharka tayada sare leh, laga bilaabo magaalooyinka ugu horumarsan ee Shiinaha.
Hissenglobal waa Iso9001 iyo shirkad caalami ah oo shahaado ah. Dhammaan hababka shaqadu waxay waafaqsan yihiin heerarka caalamiga ah. Waxaan haynaa in ka badan 20 kormeerayaal tayo leh, mid kasta oo kala soocidana waxaa lagu dhejiyaa kormeeraha tayada leh si loo hubiyo in dharka jiilaalka ee la isticmaalay aanu lahayn dalool, wasakh, jeexid xad dhaaf ah, dhar maqan iwm. Haddii aad rabto inaad iibsato gacan labaad oo tayo leh. dharka jiilaalka, dabadeed na dooro!
Hel intaa ka badan
Ku rarista weelasha waa shaqo farsamo, kuwa khibrada u leh weelasha waxay heli karaan mushaar aad u wanaagsan. Haisen waxa uu leeyahay shan master loading weel oo leh in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah. Waxay ku shuban karaan weel 40 cagood ah oo leh 10% dhar ka badan kuwa tartamaya si ay kaaga caawiyaan in aad kaydsato kharashaadka dhoofinta.
Dharka xagaaga ee Hissen Global ee la isticmaalo waxaa ka mid ah jaakadaha dhididka, surwaalka suufka dumarka, iyo in ka badan 60 qaybood oo kale.
Adeegga Iibka Xirfadlayaasha
Waxaan leenahay 10 saaxiibo iibka xirfadeed. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay si qoto dheer u fahmaan warshadaha dharka ee la isticmaalay waxayna ku siin karaan xirfadlayaal dharka la isticmaalay adeegga weydiinta. Waxay aad u yaqaanaan suuqyada Afrika, Koonfur-bari Aasiya, iyo Ameerika waxayna ku siin karaan talooyin waxtar leh. Iibiyeyaasha Hissen Global waxay leeyihiin dabeecad adeeg oo aad u wanaagsan waxayna bixin karaan adeeg iib ka dib sida wax soo saarka tooska ah iyo kormeer toos ah. Waxaan sidoo kale ku siin doonaa warbixinada kormeerka, muuqaalada kormeerka, iwm.
"Aad ayaan ugu qanacsanahay tayada dharka Hissenglobal ee la isticmaalo, gaar ahaan jaakadaha midabka leh ee dumarka la isticmaalo, kuwaas oo leh siibooyin aan sax ahayn, 90% collars cusub, iyo 80% katiinado cusub."
"Waxaan aad ula yaabay dharka Hissenglobal ee la isticmaalay. Waxaan ka iibinayaa dharka duugga ah wadamada kale ee Bariga Dhexe, sida Lubnaan, Suuriya, iwm. astaanta Hissenglobal ayaa aad looga jecel yahay dalalkan!"
"Dharka jiilaalka ee Hissenglobal waa mid aad loo raadsado. Shirkaddayadu waxay soo dejisa lix konteenar oo 40 cagood ah oo dharka gacan labaadka ah ee Hissenglobal bil kasta. Dharkooda labaad ma aha oo kaliya tayada wanaagsan, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin qiimo faa'iido leh. Mar kasta oo ay yimaadaan, waxaa la dhacaya macaamiisha. Qaar badan oo ka mid ah macaamiishayda waxay aqoonsadaan astaanta Hissenglobal."